Non-Financial KPIs - First Myanmar Investment Public Company Limited
Training, Development & Talent Retention Diversity & Inclusion
Employee Satisfaction Survey Gender Inclusive Succession Planning
Bronze Award for Excellence in the Workplace Environment Flexible & Inclusive Promotion Practice
Gold Award for Best Learning & Development Program Non-discriminatory Professional Development Programme
Best Local Myanmar Employer of the Year Group-wide Diversity & Inclusion Council
Board of Directors & Employee Development Trainings Equal Pay for Equal Work of Equal Value
Partnership with GIFT Program Childcare Support
Reintegration Programs for Employees on leave Health, Safety & Environment
Flexible Work Arrangements Preventive Measures on Accidents and Deaths
Parental Leave Practice Customers' and Employees' Health & Safety Measures
Skills Gap Analysis Community Engagement
Workplace Social Media Platforms Fund Raising for Community Donations
Senior Management Networking Clubs In-work Poverty Reduction
Customer Creating Shared Value in Banking: Yoma Bank & Wave Money
Complaints Handling & Implementation World Clean Up Day Participation 2018
Human Rights & Labor Rights Yoma Yangon International Marathon 2019
Human Rights Policy Community Light Center Program
Employment Policy Community Commitment Framework
Energy Consumption & Sourcing
PHSH's EMR - ERP System
Pwint Thit Sa Transparency Report Participation
500 Bus Shelters in Yangon
* This table summarizes the progress of programmes FMI and Yoma Group asawhole, who have jointly engaged during the period of 2018 and 2019 to align with Yoma Group’s sustainability strategy targeting the 3Ps – People, Planet and Profit.
ဝန်ထမ်းများ ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့် ဝန်ထမ်းများအား ထိန်းသိမ်းရေး
ဝန်ထမ်းများသည် ကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွက် တန်ဖိုးအရှိဆုံးသောအရာများဟု ကုမ္ပဏီအုပ်စုက ယုံကြည်ထားပါသည်။ ဝန်ထမ်း တစ်ဦးချင်းစီ၏စွမ်းဆောင်မှုသည်အများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်တိုးတက်မှုရှိရေး ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ကုမ္ပဏီ အုပ်စုအတွက်အရေးပါသောအရာဖြစ်ပါသည်။ အောင်မြင်မှုနှင့်အနာဂတ်တန်ဖိုးများဖန်တီးမှုသည် ဉာဏ်ပညာအရင်း အနှီးလုပ်ငန်းပါဝင်သည့် ဤအလွန်အရေးပါသောငွေကြေးမဟုတ်သော သို့မဟုတ် လက်ဆုပ်လက်ကိုင်မပြနိုင်သည့် အရင်းအမြစ်များ၏ ထိရောက်သောအတိုင်းအတာနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့အပေါ်တွင်မူတည်နေသည်ဟု ကုမ္ပဏီအုပ်စုက ယုံကြည်ထားပါသည်။ ဤဉာဏ်ပညာအရင်းအနှီးလုပ်ငန်းတွင် အသိပညာဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ကုမ္ပဏီ၏ ဂုဏ်သတင်း တို့ပါဝင်သည်။ သို့အတွက်ကြောင့် ဝန်ထမ်းများ အနေဖြင့် ယင်းတို့၏လုပ်ငန်းများအောင်မြင်မှုရရှိစေရန် အတွက်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများတည်ဆောက်နိုင်ရန်သင့်တော်သည့်သင်ယူလေ့လာမှုနှင့်အခွင့်အလန်း တိုး တက်မှုများရရှိလာစေရန် စဉ်ဆက်မပြတ်သင်ကြားလေ့ကျင့်မှုအစီအစဉ်များကို ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ပေး လျက် ရှိပါသည်။
Traning Programmes provided by Yoma Group HR as of Dec 2018
1 10 Soft Skills You Will Need
2 Team Building For Managers
4 Developing New Managers
5 Teamwork & Team Building Leadership Development
7 Goal Setting & Getting Things Done
8 Interaction Skill
9 Delegating with Purpose
10 Executing Strategies at Front Line
11 Negotiation Skill
12 Communications Skill for Success
14 Anger & Stress Management
15 Presentation Skill
16 Time Management Professional Development
17 Critical Thinking (Soft Skill)
22 D.I.S.C & Personal Branding
23 Business English
24 Engaging Hearts & Mind
25 Managing Meeting & Email Etiquette Professional Development
26 Microsoft Excel (Hard Skill)
27 Handling Difficult Customer
28 Design Thinking Product & Service Development
30 Finance For Non-Finance Process, Procedure, Policy
31 Project Management Financial Awareness
32 Corporate Governance Roll Out
33 Group Induction
34 Anti - Corruption
35 Code of Conduct Covenant Obligation
36 Whistle Blowing
37 Operational Compliance General Guidelines
39 Emergency Response Plan
* Delievered Onceamonth
** Delivered Quarterly
*** Delivered Biyearly
General Information on FMI’s Employee Dempographics
Mean Age (yrs old)
Training Hours Attended
Number of Accidents & Deaths
28% : 72% 100% 37 13% 14838 Hours Nil Nil Nil
* Data illustrated above is based on the Head Count of FMI Head Office level as of Dec 2018.
ထိရောက်စွာ စွမ်းအင်သုံးစွဲရေး လှုပ်ရှားမှုများ
ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ အရေးပါသောစွမ်းဆောင်ရည် ညွှန်းကိန်းများ ( KPIs)သည် ကျွန်တော်တို့၏ ရေရှည်ထိန်းသိမ်းရမည့် အစီရင်ခံစာအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့် ရေရှည်ထိန်းသိမ်းလိုက်နာဆောက်ရွက်ရန်အတွက်အလေးမှုကို အထောက် အကူပြုပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ ပါဝင်သက်ဆိုင်သူအားလုံးကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်ကာ ကျွန်တော်တို့ အနေဖြင့် အောက်ဖော်ပြပါဇယားရှိ ကျွန်တော်တို့ ၏ KPIs အတွင်း အပြန်အလှန်အားဖြင့် ဆက်နွယ်မှုကို တွက်ချက် ခန့်မှန်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ စွမ်းဆောင်မှုညွှန်ကိန်းများသည် ၂၀၁၈ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်ကာလမှစ၍ အစီရင်ခံ ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Environmental Issues Record
2017-2018 vs. 2018-2019
Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 % Change
Electricity Consumption (kwh) 1319 1652 1744 1843 1857 1989 2352 2450 32% Increase
Waste Disposal Record (ton) 3.82 4.58 20% Increase
Water (m²) 85.4 106.5 125.9 111.1 124.8 139.6 147.0 116.9 23% Increase
* This Environmental Issues Record illustrates FMI’s electricity consumption and waste collection between October 2017 and September 2018. % Change for Waste Disposal is displayed as0because FMI has relocated to its new Head Office in mid-2017 only.
မတော်တဆ ဖြစ်မှု / ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု လုံးဝ မရှိ
ကုမ္ပဏီအုပ်စုသည် လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း မတော်တဆဖြစ်မှု၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှုများကို အစွမ်းကုန် ကာကွယ်တားဆီးရန် ဆုံးဖြတ်ထားပါသည်။ မတော်တဆ ဖြစ်မှု / ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိမှု လုံးဝ မရှိစေရေးသည် ကုမ္ပဏီအုပ်စု အတွင်း မဖြစ်မနေ လိုက်နာရမည့် ညွှန်ကြားချက် တစ်ရပ် ဖြစ်ပါသည်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို လေးစားမှု အပြည့်အဝဖြင့် ကိုင်တွယ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၊ စာဖြင့်ရေးသားဖော်ပြထားသော မူဝါဒများ၊ လုပ်ငန်းစဉ်များကို အခြေခံ၍ အဆင့်အတန်း မြင့်မားသော ဘေးကင်းလုံခြုံရေးနှင့် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု စနစ်များကို အကောင်အထည်ဖော် တည်ဆောက်ထိန်းသိမ်းသွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။ သို့မှသာ ကျွန်တော်တို့ ကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ ဝန်ထမ်းများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပြီး ဖြစ်သလို မိမိတို့၏ လုပ်ငန်းများကြောင့် ကုမ္ပဏီအုပ်စုပြင်ပမှ တခြားလူများ ထိခိုက်ဒဏ်ရာ ရရှိနိုင်မှုများကိုလည်း ကာကွယ်သွားနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွင်း ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှုများကို သင့်တော်သော သင်တန်းများ၊ အရင်းအမြစ်များ သုံးစွဲ၍ ဝန်ထမ်းများအား ပေးအပ်လျက် ရှိပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင် တစ်ခုလုံးတွင် ပါဝင်ပတ်သက်နေရာသော ဝန်ထမ်းများ၊ ကန်ထရိုက်ဝန်ထမ်းများ၊ တဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်ဝန်ထမ်းများအားလုံး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ကိစ္စများတွင် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော ဘေးအန္တရာယ်များကို ကြိုတင် တွက်ချက်ပြီး ထိန်းချုပ်နိုင်ရန် စီစဉ်ထားရှိပါသည်။ ကုမ္ပဏီအုပ်စု၏ OH&S ဌာနသည် အောက်ပါ OH&S သင်တန်းများကို ကျင်းပခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီအုပ်စုအတွင်း မတော်တဆ ဖြစ်ပွားမှု အကြိမ်အရေအတွက်ကို လျော့ချနိုင်ရန် / ကာကွယ်တားဆီးနိုင်ရန် တက်ကြွစွာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
In-house Safety Training Course
1 Safety Induction Course
2 Safety Awareness Briefing on site
3 Fire Fighting Demostration
4 Basic First Aider Training
5 Risk Management Training